Somali (Af-Soomaali) | A Good Friend(Saaxiib Wanaagsan) | WorldStories
Saaxiib Wanaagsan Noel White
Qoyska Yasin waxay Iraq ka soo guureen oo ay yimaadeen England isagoo wiil yar ah. Yasin ma uusan doonaynin inuu ka tago gurigiisii ku yaalay Samarra laakiin aabihi yaa yidhi reerka way u roon tahay, maxaayelay kusii noolaanshaha halkaasi badbaado ma aha, wuxuuna doonaayey in wiillkiisu ku koro dal oggol dad oo dhan. Aabaha Yasin wuxu u sheegay wiillkiisa in England ay tahay dal dhaqanno badan oo kala duwan leh halkaaso dadku ay wada nool yihiin oo ay wada shaqeeyaan iyadoon loo eegaynin jinsi ama aaminaadyo diineed.
Inkasto Yasin uusan ku faraxsanayd ka guurista Iraq, durba wuu la qabsaday ku dhex noolaanshohiisa magaalo wayn oo la yiraahdo London. London waxay ahayd mid xiiso wayn leh iyo dhismaheeda dhaadheer iyo matxafyo, wuxuuna Yasin si khaas ah u jeclaystay London dhismayaalkeeda laga eego samada (London Planetarium) iyo wabiga wayn ee Thames iyo buundooyinkiisa da’da ah oo idil.
Xaata wuxuu Yasin la saaxiibay wiil ku nool albaaka xiga oo la dhaho Andrew. Xagaagii oo idil Andrew iyo Yasin waxay ku ciyaari jireen beerta ama ay u raaci jireen hooyada Andrew beerta xayowaanka. Andrew wuxuu la qaybsaday Yasin toyadiisa iyo majaajilooyinkiisa oo uu uga sheekeeyay ‘superheroes’- yaalkiisa oo idil. Xatta waxay ka dhisteen ardaaga dambe ee Yasin xero ay kaga dhuuntaan dadka waawayn.
Xagaagu wuxuu ahaa xiliga fanka, Yasin yarena wuxuu durba London dhexdeeda ku dareemay deganaanshiiyo inkastoo ay ahayd magaalo aad u wayn oo ayna u dhawayn qorraxeed-keedu iyo kulaylkeedu sidii kuwii Samarra. Af - Ingiriisigiisu wuu sii fiicnaaday, oo sii fiicnaaday, khaasatan kaalamada uu ka helay Andrew, inkasto ay jireen erayo badan oo uusan Yasin fahmaynin oo uu dareemi jirey nacasnimo sababto ah sidii u jeclaan laha inuusan si fiican ugu hadli karin.
Markii u dambaystii ay Sebtembar timid, caleentuna ay billowday iney geedaha ka dhacdo, aabaha Yasin wuxuu sharxay in la gaadhay waqtigii uu wiilkiisu dugsi u kici laha. Yasin wuxuu jiray toddoba sano marka wuxuu gali laha sannadka seddexaad ee dugsiga hoose ee xaafadda – isla sannadkii sida saaxibkii Andrew!
Inskastoo uu Yasin aad uga argagaxsana dugsi aadista, waxay aabihi iyo hooyadii u xaqiijiyeen iney noqon doonto meel xiiso badan meeshaas oo uu kula kulmi doono saaxiibo badan oo cusub oo uu baran doono waxyaalo badan oo xiiso leh.
‘Waxaa loo haysta dugiyada Ingiriisigu iney aad u fiican yihiin,’ ayay tiri hooyada Yasin.
‘Waxaadna baran doonta waxyaalo aad u xiiso badan, Ingiriisigaaguna si dhaqso ah ayuu u fiicnaan,’ ayuu aabihi u xaqiijiyay.
Yasin wali ma qancin, laakiin markii uu Andrew gar-garacay albaabka subaxdaas isago dhoollo-cadayn wayni ka muuqato wajigiisa isagoo leh dugsi u kicistu xiiso wayna, ayuu Yasin dareemay xiisayn badan sababto ah wuxuu aaminay saaxiibkii.
Waxay labadii wiil sii sheekaysanayeen ilaa ay ka gaarayeen albaabkii dugisga. Andrew wuxuu u sheegay Yasin meesha lagu ciyaaro iyo macallinka ugu wanaagsan, wiilasha ugu xiiso badan iyo gabdhaha ugu quruxsan iyo sida qaalibka ah sida waqtiga qadada labaniyad (custard) macmacaan ahaan. Yasin ma aqoonin waxa labaniyad ay tahay, laakiin Andrew wuxuu u ekaa mid aad u xiisaynaya iyada sida awgeedna ayuu Yasin u qaatay iney si fiican u dhadhamayso.
Laakiin markay wiilashii galeen fasalkoodii, arrimuhu uma dhicin sidii uu Yasin moodaayey iney noqon. Macallinkii yaa u sheegay Andrew inuu fariisto kursi fasalka xaggiise hore ah, markay Yasin bartay caruuta intooda kale. Ma uusan jeclaysan inuu taagnaado fasalka hortiisa oo uu hal wiil ku qaylyo inuu yahay ajnabi uraaya. Wiilashii iyo gabdhihii kulli way qosleen, deedna wiil kale yaa ku maadsaday Yasin hadalkiisa markii la waydiiya inuu sheego magaciisa iyo meeshu ka yimid.
‘Anigu isaga ma fahmi karo, miss. Xatta Af - ingiriisi kumuu hadli karo,’ ayuu yiri wiil xuni.
U dambay, Yasin waxaa loo oggolaaday inuu fadhiisto kursi xagga dambe ee fasalka ah, laakiin waxuu rajeeyay inuu ku xigo Andrew maadaama uu dareemay kalinimo aad ah. Gabarti fadhisay dhinaciisa ayaa si yaab leh u fiirinaysay sidaas oo uusan Yasin jeclaysan, deedna xiisadii oo lagu jiray ay gacanteed kor u taagtay oo ay wadiisatay macallinkii haddii ay meelaha kala wareejin karto. Yasin ma fahmin wax uu sameeyay oo uu ugu gafay gabadha.
Markuu dawanku dhacay waxay ahayd waqtigii loo bixi lahaa meedaanka ciyaarta. Caruuti oo idili waxay isku laabeen buugtoodii oo ay xirteen koorarkoodii oo ay dibada uga baxeen albaabka inftiinka shucaaca qorraxda ee dayrta. Macallimadii waxooga yay reebtay Yasin waxayna siisay astaan uu magaciisu ku qoran yahay oo ay ugu dhajisay jaakadiisa.
‘Wa kukaa,’ ayay tiri iyadoo dhoolo-caddaynaysa. ‘Hadda caruurta oo dhan way baran magacaaga.’
Yasin wuxu u maleeyay in astaantu ay u egtahay nacasnimo, markuu meedanka ciyaara u soo baxayna caruurtii oo idil ayaa billaabay iney farta ku soo fiiqaan oo ay qoslaan.
‘Waxaad leedahay magac gabdheed,’ ayuu yiri wiil yar oo timo cad oo qalqalooca leh.
Wuxu damcay Yasin inuu sharxo inuusan ahayn magac gabdheed. Laakiin aad buu u argagaxsana maxaa yeelay ciyaalkii oo dhan yaa farta ku soo fiiqaayay oo ku qoslaayey. Markii Yasin argagaxayna Af-ingiriisigiisu aad uma fiicnayn, erayadana wuu ku marganaayey. Aad buu u murugaysna oo uu doonay inuu ka cararo meedaanka ciyaarta oo uu ku noqdo aabihii iyo hooyadii oo uusan marnaba dib dambe ugu soo noqon dugsiga. Laakiin markii uu islahaa aad orodid ayuu maqlayay cod uu garanaayey.
‘Haye Yasin.’ Markuu kor fiiriyeyna waaba Andrew oo taagan dhabarkiisa uun.
Andrew ayaa fiiriyay ciyaalka ku hareeraysan deedna luxay madaxiisii. ‘War maxaa idinka khaldan dadyahow?’ ayuu waydiiyay. ‘Waxaan u sheegay saaxiibkay Yasin in dugsigu yahay meel fiican. Maxaad isaga uga burburinaysaan?’
‘Wuu ka duwan yahay,’ ayay tiri gabar dheer oo hor taagnayd ciyaal badan.
‘Hadaba ma adiga,’ ayu yiri Andrew. ‘Waxaad tahay gabadha ugu dheer dugsiga oo dhan mana jeclid marka dadku ay kugu maadsadaan, miyaad?’
Deedna Andrew wuxuu fiiriyay wiilkii lahaa timaha leexleexsan. ‘Adiguna ma jeclid marka dadku yiraahdo waxaad leedahay timo gabdheed,’ ayuu ku yiri wiilkii. Kulligeen waan kala duwan nahay waxa xiisaha innoo yeelayana taas. Noolasho sidey u ekaan lahayd haddii aan kulligeen isu ekaan lahayn?’
Caruutii way aamuseen.
Deedna Yasin baa madaxiisi kor u qaaday oo yidhi isagoo ilka-caddaynaya ‘Xiiso-la’aan’
‘Taasi waa sax!’ Ayuu ku dhawaqay Andrew, isago uga jawaab celinaaya dhoollo-caddayska saaxiibkii. ‘Aad’ u xiiso-daran!’
Waxay billaabeen iney caruurtii oo idili taa ku qoslaan.
‘Aad’ u xiiso-daran,’ ayay midba midka kale iskula sheekaysteen.
Andrew ayaa sii waday inu sharxo sidii ay Yasin xagaagi waqtiga u wada qaateen, sidii ay wada jir u dhiseen xero oo ay ugu wada ciyaari jireen beerta, iyo sidii uu Yasin Batman uga doortay Superman, iyo sida uu run ahaan uga duwanaa maxaa yeelay xatta ma uusan jeclayn hotdogs!
Caruurtii oo dhan yaa qosolkii sii kordhisay, durbaba ruux kasta wuxuu ka hadlaayey waxyaalaha keenay oo idil in midba midka kale ka duwanaado. Peter Jenkins xattaa wuxuu kor isaga saaray koorkiisi oo uu tusay ruux kasta calaamad casaan ah oo uu ku dhashay oo xagga hore ee caloosha kaga taalay.
‘Hadda waa taa waxaan ugu yeero kala duwanaasho,’ ayuu u yiri si guulaysi ah. ‘waxaan ku sharatamayaa inaan midkiinna lahayn calaamad dhalasho oo u wayn sida tayda!’
Markii uu dhammaaday waqtigii nasashada, ayuu Andrew gacanta kor u taagay fasalka dhexdiisa oo macallinka u soo jeediyey iney xiisad ku qaataan ka hadalka wanaaga ay lahayd sida uu ruux kasta uga duwanaa ruux kasta oo kale iyo sida ay dadku adduunka meel walba uga yimaadeen England si ay nolol cusub uga billaabaan sida saaxiibkii Yasin.
Macallimadu way ku raacday iney muhiim tahay inaad ahaato shaqsi, waxaa kalo ay tidhi sida ay yaab u lahayd in Britain oo idil ay ahayd jaziirad dhaqamo sidaa u kala duwan. Labadan eray buu Yasin ku qoray buugiisa oo uu naftiisa ugu ballan qaaday inuu labadoodaba baran doono oo uu mar walbana xusuusan doono. Waxaa kaloo uu ku qoray buugiisa erayga saaxiib. Wuuba yaqaanay waxa saaxiib ay ka dhignayd, laakiin wuxuu doonayay uun inuu qoro maxaa yeelay wuxuu dareemay nasiib wayn inuu yeesho saaxiib wanaagsan sida Andrew oo kale kaaso u istaagay dadka oo aan ku xukumin ka duwanaantooda oo kaliya.